IINGCAMANGO EZINGAMA-87 ZETATOO ZEDEER [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-87 zeTatoo zeDeer [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Ukusuka kubazingeli ukuya kubaphengululi bendalo, amaxhama anembali ende emileyo phakathi kwamadoda ngaphandle okukhulu. Banokuba nzima ngamanye amaxesha ukuzingela, nangona kunjalo imbali yabo ikrolwe ilitye.
Efihliweyo phakathi kwehlathi uya kufumana ezi zilwanyana zinobuntu zihambahamba zijikeleze uMhlaba. Nangona, unokumangaliswa kukwazi ukuba kukho enye into yokuba luhlobo olunye xa kufikwa kwixhama. Ukungathethi, iiseti zazo ezinkulu nezinomtsalane zeempondo zifumaneka kuphela emadodeni.
Ukuthetha ngeempondo, kwinqanaba levelvet zisetyenziswe ngokubanzi eAsia ngaphezulu kweminyaka engamawaka amabini njengezongezo zamayeza. Nokuba kwihlabathi lasentshona, iimbaleki kunye nabakhi bomzimba baye babonwa besebenzisa izicatshulwa ukwakha nokubuyisela izihlunu zemisipha. Nangona kunjalo, enyanisweni, ubungqina bokukhutshwa kokusebenza ngokwenene abukho nje, bubenza bube yindawo ye-placebo ngakumbi.
Ukuba ubuya kuthabatha ixesha elidlulileyo ubuya kufumana i-antler phantse yonke into isuka kwizixhobo ukuya kwizixhobo kwanokudlala. Nkqu neeViking zakha zayijonga njengendawo exabisekileyo yokwenza ikama. Ukusukela ngoko, iye yathatha indawo yophondo lwendlovu kwaye yafumana indlela yayo kwizinto ezinje ngezihlalo, imipu, iiflask zomgubo, nangaphezulu. Ewe, imiboniso yokuhombisa ikwanazo neempondo ezibekwe eludongeni njengakumaxesha amandulo.
Ngale nto ithethwayo, thatha umzuzwana wokuphonononga ubuhle bale tattoos ezingama-90 zibalaseleyo zamadoda. Ukusuka kumabala okwenzeka kwangaphandle ukuya kwindawo epholileyo yeengqayi, kukho imibono emininzi yoyilo onokuyithanda.
Olu luphawu olumnyama ngokumnyama kunye nengwevu, uyilo olupheleleyo lwemikhono olubandakanya ixhama kunye nezinye izinto zendalo ukwenza umvambo owahlukileyo. Inqanaba leenkcukacha kwesi siqwenga liyamangalisa kwaye ukusetyenziswa kobuchwephesha kwe-grey wash shading kuvumela umzobi ukuba afezekise i-tattoo eyinyani. Ukwenza mnyama ebusweni bexhama kububamba ngokugqibeleleyo ubunjani boboya kunye nokwakheka ngokubanzi kwenza ukusetyenziswa okukhulu kwamagqabi kunye nezinye izinto ukubumba ubuso bexhama. Izinto ezingalunganga ezisetyenziselwa ukwenza indawo ye-wisps yomsi kunceda ukujonga iliso phezulu nasezantsi lonke uyilo kwaye kunceda ukwenza le tattoo enamandla ngakumbi. Lo ngumzekelo omhle we I tattoo yokwenyani kunye nobungqina besakhono kunye nomonde womculi.
Olu luyilo luhamba nesicwangciso esine-stylized ngakumbi, sokubonisa ukuyila I tattoo enomdla . Eyona nto ibalulekileyo kukusetyenziswa kwe-shipple shading ukwenza ii-swirls kunye nee-whorls ezikhumbuza ukuprintwa kweminwe, okanye amakhonkco omthi. Ukusetyenziswa kwesithuba esibi kumanqaku aphezulu kudala umahluko kwiipateni ezixineneyo kunye nemilinganiselo yoyilo. Umsebenzi womgca uchanekile kwaye uyahambelana kwaye ukufakwa kwezinyo kunye nesitshixo esixhonywe kwiimpondo kukuchukumisa buqu okuqhubeka kuseta oluyilo ngaphandle kwezinye iitatoo ezinamaxhama. Uyilo olukhulu kunye nokubetha ngokuqinisekileyo ukujika iintloko.
Nalu uyilo olusebenzisa i-inki emnyama kunye engwevu ngenani leendlela ezahlukeneyo zokufaka umbala ukwenza i-tattoo enkulu kunye nesibindi. Ukujijelwa kwesabhokhwe ebusweni bexhama kudala ukubonakala koboya ngelixa ukujija kweendlebe ezindlebeni kongeza enye indlela kuyilo. Ukuqengqeleka okungahambelaniyo kwiimpondo kuyahlula ukwahlulahlula ukuphunyezwa kwaye kubonise ingqalelo yomculi kwiinkcukacha. Okokugqibela, isithuba esibi esivela emlonyeni wexhama songeza enye inkqubo eyahlula ngokuthe gabalala nezinye iinxalenye zoyilo. Ukuchaneka komsebenzi womgca kunye nokwakheka okunomdla kuyenza le tattoo abanokuzingca bobabini amagcisa kunye nabayinxibayo.
Uyilo olumangalisayo lusebenzisa i-inki emnyama, indawo engalunganga kunye nobunyani, ubugcisa oboyikekayo bokwenza enye yeetato ezinomdaka. Mhlawumbi elona candelo libalulekileyo kule tattoo linqanaba leenkcukacha ezifezekisiweyo kwiimpondo nakwikrele. Igcisa likwazile ukubamba ngokugqibeleleyo indawo eqhekekileyo nenxibileyo yokakayi isebenzisa istiple shading kunye nendawo engeyiyo, ngelixa uburhabaxa beempondo bujongeka ngokungathi buphakanyisiwe kulusu. Ukusetyenziswa kwe-flecks kunye ne-inki yokuvuza kunika le tattoo ukuziva ukhululekile ngelixa kugcinwa inqanaba lokwenyani leenkcukacha kunye nokubekwa ngenkalipho kunye noyilo olwahlukileyo kwenza le tattoo ibethayo esebenza njengobungqina kubuchule begcisa.
Ilemoni tattoo emnyama namhlophe
Olu luyilo oluthandekayo olusebenzisa isitayile saseMelika sokwenza imvambo elula kodwa ekholisayo. Umsebenzi olayini ongqindilili kunye nephalethi emiselweyo yemibala zizinto ezisisiseko zale ndlela kwaye zisetyenziswa kakhulu apha. Ukungaguquguquki komsebenzi we-line kubalasele: ulwandlalo luthambile kwaye lucocekile; kujongeka ngathi inokuba ngumgca omnye utsaliwe kudlula kube kanye. Ukuthambeka kombala kwintaka kubalasele kwaye kwaye kongeza inqanaba lobume obubamba ngokugqibeleleyo ukubonakala kweentsiba. Ukusetyenziswa kwesithuba esibi kumanqaku aphezulu kunye nombala ogcweleyo kudala umahluko ngaphandle kokubingelela isibheno esilula, esihle kwisitayile sendabuko saseMelika.
Imibuzo ebuzwa rhoqo ngeTatoo Tattoo
Ifuzisela ntoni tattoo yenyamazane?
I-Deer iyachuma emhlabeni wonke, ukusuka kwiiScotland zaseScotland ukuya kumahlathi emvula ase-Mpuma ye-Asiya, kwaye naphina apho zifumaneka khona zibandakanyiwe kwiintsomi nakwinkcubeko yabantu bendawo. Kwabaninzi, amaxhama amele ukomelela nobungangamsha bendalo; zingabagcini abanamandla bendalo.
Amaxhama angamaduna, kunye neempondo zawo ezinkulu kunye neemfazwe abazibandakanyekayo ngexesha le-rut, nazo bezimele ubungqongqo kunye nobunkokheli. Bacingelwa njengabacebisi bokomoya kwezinye Amasiko aseMelika aseMelika Kwaye zihlala zimela ukuhlaziywa ngenxa yendlela i-antlers eziwa ngayo kwaye ziphinde zaziwa kubomi babo bonke. Kwabanye, amaxhama amele uxolo kunye nokuvisisana kwendalo kunye nokubaluleka kokukuqonda oku kunxibelelana.
Ezi zidalwa zinamandla zikhethwe njengezifundo zeetatoo uninzi lweempawu ezizimeleyo, kunye nezinye izizathu ezizezomntu. Nokuba zinokufanekisela ntoni kubantu abahlukeneyo, ezi zilwanyana zinobungangamsha zenza iitatoo ezintle.
Imikhono yesiqingatha semikhono engaphantsi
kuthetha ukuthini ukuba mnene
Ilanga kunye nenyanga yenyanga
zingaphi iiprotein zomgubo ngosuku
ibha yomqolomba womntu uyathengiswa